Archive du 20170627
Rajaonarimampianina Misy mikasa hamono ?
Voalohany tao anatin’ny 57 taona nanamarihana ny fetim-pirenena Malagasy no nahitana fitaratra be toa fefy nanafenana ny filohan’ny repoblika sy ireo lehibena andrim-panjakana eto amintsika tahaka ny tazana teny Mahamasina omaly.
Kabarin’ny filoha Fialana bala no betsaka
Nanjaka ny tsy fahamarinan-toeran’ny fitondrana sy ny tsy fisian’ny fototra ara-dalàna teo amin’ny fitantanana an’i Madagasikara tao anatin’izay 57 taona niverenan’ny fahaleovantena izay.
Depiote Horace sy ny antoko TIM 6 è Tsy manao ambanin-javatra ny fanabeazana
Tsy manao ambanin-javatra ny resaka fanabeazana mihity ny Depiote Rasoanoromalala Horace miaraka amin’ny antoko TIM misy azy eny amin’ny Boriborintany faha-6.
Rajaonarimampianina sy Macron Hihaona manokana any Paris
Nandefa taratasy ho an’ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Firarian-tsoa sy fiarahabana ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny vahoaka Malagasy manontolo noho ny fetin’ny fahaleovantena sy fampatsiahivana ny fifandraisan’i Frantsa sy Madagasikara no vontoatin’ny taratasy.
Kaominina Alasora Voakarakara manokana ireo zokiolona
Niavaka ny fanamarihana ny fetin’ny fahaleovantena ho an’ny kaominina ambanivohitra Alasora.
Fankalazana ny fetim-pirenena Kitoatoa ny fampitana mivantana
Toy ireny mody manetsiketsika vava ireny fotsiny ny fahitana ireo mpanao gazety nampita mivantana tamin’ny Televiziona Malagasy (TVM) ny matso teny Mahamasina omaly nanomboka tamin’ny 10 ora maraina latsaka fahefany.
Raharaha 26 jona 2016 Nijanona ho mistery
Feno herintaona omaly no nisian’ilay asa fampihorohoroana nitranga tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny alin’ny 26 jona 2016 nandritry ny rindran-kira nandraisan’ireo mpanakanto maro ho fanakatonana ny fankalazana ny faha-56 taonan’ny fahaleovantena sy ny foloalindahy.
Antenimierandoholona Misokatra ny tranonkala manokana
Manana ny tranonkalany manokana ny antenimieradoholona eto amintsika amin’izao fotoana izao, ka ny asan’ny antenimiera no haseho ao. Hamafisina ihany koa ny serasera mba tsy haha tompontrano mihono ny vahoaka Malagasy, raha ny fanazavana.
Afomanga teny Ampitatafika Nahavory olona an’arivony
Toy ny kaominina hafa manodidina ny renivohitra rehetra dia niavaka sy nanana ny maha izy azy ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona ho an’ny kaominina Ampitatafika.
CFPM de Madagascar Namoaka mpianatra 250 mianadahy
Ivontoeram-piofanana tsy miankina iray mijery sy mitsinjo manokana ireo ankizy tsy mba manana diplaoma nefa efa tokony hiditra eo amin’ny sehatry ny asa ny CFPM ( Centre de formation professionnelle Moderne) de Madagascar eny Talatamaty.
Silamo Ahmadiyya Tokana ihany ilay Mpahary hinoana
Nanatontosa ny fizarana «Fitrana» ny faran’ny herinandro teo ny silamo Ahmadiyya eny Andavamamba.
Fandoto iray tandroka…
Ny volana jolay 2016 no hita voalohany tetsy amin’ny hotely Panorama Andrainarivo ny Dinika ho Fanavotam-Pirenena (DFP). Ankolafin-kery mpanohitra maro no tafavory teny an-toerana tamin’io fotoana io ary anisan’ny nampivondrona ny raharaha Soamahamanina.
Fikambanana FI3 Tanjombato Nanatanteraka didimpoitra faobe
Toy ny fanaony isan-taona dia nanatanteraka didimpoitra faobe indray ny fikambanana « Fijery Vaovao » eny Tanjombato teo aloha izay lasa « Fihavanana, Fifankatiavana ary Firaisankina » ankehitriny (FI 3).
GDPEM Hamaha ny olan’ny famokarana angovo
« Ny antom-pijoroanay GDPEM, dia hamaha ny olan’ny angovo eto amintsika, satria azo hatao tsara izany, amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny orinasa tsy miankina sy ny fanjakana amin’ny fananganana “central” kely be dia be isaky ny kaominina eran’i Madagasikara.
Fanadinana CEPE Niharatsy ny vokatra
Nivoaka ny alahady maraina teo ny voka-panadinana CEPE ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra. Mpiadina 17.201 tamin’ireo 30.930 niatrika izany no afaka.
Miisa 1400 ireo olona nasaina nandritra ny lanonana fiaraha-misakafo lehibe teny Iavoloha nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena.